ဒေသတွင်းကို သွင်းဂိုးတွေနဲ့ စိုးမိုးထားခဲ့သူများ | FOX Sports Myanmar
ဒေသတွင်းကို သွင်းဂိုးတွေနဲ့ စိုးမိုးထားခဲ့သူများ
အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ဂန္တ၀င်ကစားသမား တွေကိုတော့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ရင်းနှီးမှုရှိအောင် မကြာခဏဖော်ပြနေကျပေမယ့် ဘယ်ကစား သမားတွေက နိုင်ငံအသင်းတွက် သွင်းဂိုးတွေ ဘယ်လောက်သွင်းယူထားခဲ့ပြီး ဘယ်သူတွေက အသင်းရဲ့ ထာဝရထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင် ဖြစ်နေလည်းဆိုတာ ကိုတော့ ဖော်ပြခဲ့ဖူးခြင်းမရှိပါဘူး။
အာရှအဆင့် ပြိုင်ပွဲမှာ အမြဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရရှိနေတဲ့ နိုင်ငံအသင်း ကိုယ်စားပြုကစားနေတဲ့ ကစားသမားတွေနဲ့ အာရှဆင့်ကို တက်လှမ်းဖို့ အားယူနေရတဲ့ နိုင်ငံအသင်း ကစားသမားတွေကြားမှာတော့ ပွဲအရေတွက်နဲ့ သွင်းဂိုးကွာဟချက်က ကြီးမားပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီလိုအသင်းကြီးက အသင်းနဲ့ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့် ရရှိခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေ ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေက ထိပ်တန်းမှာ ရှိနေခဲ့ တာက သူတို့ပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ ပွဲအရေအတွက်နဲ့ သွင်းဂိုး တိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတာ ကြောင့်ထူးဆန်းတဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်တေ့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဥပမာပေးရရင် အီရန်ကလက်ရွေးစင် တိုက်စစ်မှူးဟောင်း အလီဒါရီဟာ အသင်းတွက် ကစားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာပွဲပေါင်း (၁၄၉) ပွဲမှာ (၁၀၉) ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဟန်ဂေရီရဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမား ပွတ်ရ်ှကတ်ထက် သွင်းဂိုး (၂၅) ဂိုးပိုမို သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသွင်းဂိုး အများဆုံးကစားသမား ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း (၁၀) ဦးစာရင်းမှာ အခြားအာရှရဲ့ ထိပ်တန်းကစားသမားတွေလည်း ပါဝင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ (၈၄) ပွဲ ကစားပြီး သွင်းဂိုး (၈၀) ရယူထားနိုင်တဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသား ကာမာမိုတို ၊ (၁၃၇) ပွဲမှာ (၇၈) ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့ အီရန်နိုင်ငံသား ဟတ်ဆိန် ၊ (၁၁၆) ပွဲကစားပြီး (၇၁) ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ကစားသမား မာဂျစ်အဒူလာတို့ လို့ အာရှကစားသမားတွေ ထိပ်ဆုံး (၁၀) ဦးစာရင်းမှာ ရှိနေပါတယ်။ တစ်ချို့ အသင်းရဲ့ ဒုတိယသွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားတွေကလည်း တခြား နိုင်ငံကထိပ်တန်း ဂိုးသွင်းရှင်တွေထက် သွင်းဂိုးတွေ ပိုမိုသွင်းယူထားနိုင်တာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
ဒါဆိုအာဆီယံဒေသတွင်း အသင်းတွေထဲကကော ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင်တွေက ဘယ်အဆင့်မှာ ရပ်တည်နေလည်းဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို Fox Sports Asia ကဖြေ ကြားပေး လိုက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အဆင့် ၆၂ ၊ အာရှအဆင့် ၁၈
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အတွက် သွင်းဂိုး (၃၈) ဂိုးသွင်းယူပေးထားနိုင်တဲ့ တစ်ဦးတည်း သောကစားသမား ဖြစ်တာကြောင့် ဘန်ဘန်းရဲ့ နာမည်လည်း ဒီစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ အသက် (၃၇) နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး အသင်းတွက် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ (၂၀၁၂) ခုနှစ်ထိ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အသင်းကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သူပါ။
⚔♥⚔ . #PersijaDay #GuePersija #PersijaJakarta #PersijaSelamanya . Tetap semangat dan sukses selalu ✊? . Photo by @imammiot . ••••
လူငယ်ကစားသမားဘ၀ကို နယ်သာလန် ကလပ်အသင်းတစ်ခုမှာ စတင်နိုင်ခဲ့ပြီး တဲ့နောက်မှာတော့ ပြည်တော်ပြန်ခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှားကလပ် ပါဆီဂျာ ဂျကာတာ နဲ့ ဆီလန်ဂေါ အသင်းတွေမှာ ကလပ်အသင်းကစားသမားကို ကုန်ဆုံးခဲ့သူပါ။အသက်အရွယ်ပိုင်း အရ ကစားသမားတစ်ဦးရဲ့ အကောင်းဆုံး အချိန်တွေကို ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီလို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပေမယ့် လက်ရှိကစားနေတဲ့ ပါဆီဂျာ အသင်းတွက် ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ အင်ဒိုနီးရှား လိဂ် ၁ ပြိုင်ပွဲမှာ သွင်းဂိုး (၅) ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ ပါတယ်။(၂၀၁၂) ခုနှစ်မှာ နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အသင်းကနေ အနားယူခဲ့တာကြောင့် သွင်းဂိုး (၃၈) ဂိုးမှာသာ ရပ်တန့်သွားခဲ့ရတဲ့ ဘန်ဘန်းရဲ့ သွင်းဂိုးတွေဟာ ရိုမေးရီးယား နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ ဂျော့ခ်ျဟာဂျီ နဲ့ မူတူးတို့ထက် (၃) ဂိုးပိုမိုများပြားတဲ့ ပမာဏတစ်ရပ်ဖြစ်နေဆဲပါ။
ကမ္ဘာ့အဆင့် ၄၅ ၊ အာရှအဆင့် ၁၃
အခုဖော်ပြနေတဲ့ ထိပ်တန်း ဂိုးသွင်းရှင် (၅) ဦးစာရင်းမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ နိုင်ငံအသင်းတွက် ကစားနေဆဲဖြစ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကစားသမာပါ။ အသက် (၃၀) အရွယ်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအသင်းတွက် သွင်းဂိုး (၄၇) ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ ပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးအသင်းမှာလည်း ကစားခဲ့ဖူးပြီး အသင်းရဲ့ လူသိများတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး တော့အဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် ချဲလ်ဆီးအသင်းမှာ ကစားခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် ကစားသမား ရှက်ချန်ကိုထက် သွင်းဂိုး (၁) ဂိုးသာလျော့နည်းပြီး နိုင်ငံတကာ ဂိုးသွင်းအများဆုံးစာရင်းမှာ အပေါ်အောက် ရပ်တည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာလည်း နိုင်ငံအသင်းနဲ့အတူ (၂၀၁၉) အာရှဖလား ခြေစစ်ပွဲဝင်ရောက် ကစားနေတာကြောင့် ယန်းဟတ်စဘန့် ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေ ထပ်မံမြင်တွေ့ရဖို့ ရှိနေပြီး ရပ်တည်မှု ဇယားမှာလည်း နောက်တစ်ဆင့်ကို တက် ရောက်နိုင်ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အဆင့် ၃၄ ၊ အာရှအဆင့် ၁၁
အားလုံးသော ပရိသတ်တွေ လီကောင်ဗင်က ကစားသမားကောင်းဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လီကောင်ဗင် က ဘယ်လောက်အသင်းတွက် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားလည်း ဆိုတဲ့ မေးခွန်းအတွက် အဖြေလည်း ရှိနေပါတယ်။
အသင်းတွက် သွင်းဂိုး (၅၁) ဂိုးသွင်းယူပေးထားနိုင်တဲ့ လီကောင်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ ပြင်သစ် တိုက်စစ်မှူး အွန်နရီနဲ့ ပိုလန်တိုက်စစ်မှူး လီဝန်ဒေါစကီးတို့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်အသင်းတွက် ပထမဆုံးနဲ့ တစ်လုံးတည်းသော အာဆီယံ ဆုဖလား ကိုသူ့ရဲ့ သွင်းဂိုးတွေနဲ့ ရယူပေးခဲ့သူပါ။ အသက် (၃၀) အရွယ်မှာ အနားယူခဲ့ပြီး ဖြစ်တဲ့ သူရဲ့ စံချိန်ကို ဘယ်ကစားသမားက ချိုးဖြတ်နိုင်မလည်း ကစိတ်ဝင်စားစရာပါ။
ကမ္ဘာ့အဆင့် – ၂၆ ၊ အာရှအဆင့် – ၉
အာဆီယံဒေသတွင်း နိုင်ငံတွေမှာတော့ နာမည်ကျော်ကစားသမားတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အဆုံးသတ်အကောင်ဆုံး တိုက်စစ်မှူးတွေထဲက တစ်ဦးပါ။ဟော်လန်ကလပ် အသင်းဖြစ်တဲ့ ဂရိုနီဂန်အသင်းမှာ သွားရောက်ကစားခဲ့ဖူးပြီး ယခင် UEFA Cup ယခု ယူရိုပါလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အင်တာမီလန်အသင်းဘက်ကို သွင်းဂိုးတစ်ဂိုး သွင်းယူနိုင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။
ဖန်ဒီရဲ့ သွင်းဂိုး (၅၅) ဂိုးဟာ ကင်မရွန်းတိုက်စစ်မှူး အီတူးထက် တစ်ဂိုးသာ လျော့နည်းပြီး အင်္ဂလန်တိုက်စစ်မှူး ရွန်နီထက် (၃) ဂိုးပိုမိုများပြားတဲ့ ပမာဏဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်ဒီမှာ သား (၄) ဦးရှိပြီး (၂) ဦးကတော့ စင်ကာပူအသင်းရဲ့ လက်ရွေးစင်ကစားသမားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ သူ့ရဲ့ သား (၂) ယောက်ထဲက ဘယ်သူကကော သူ့ရဲ့စံချိန်ကို ချိုးဖြတ်နိုင်မလည်း စောင့်ကြည့်ချင်စရာ ကောင်းနေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အဆင့် – ၉ ၊ အာရှအဆင့် – ၅
အာရှရဲ့ ထိပ်ဆုံး (၅) ဦးစာရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်ဆုံး (၁၀) ဦးစာရင်းမှာ ရပ်တည်နေတဲ့ ကစားသမားပါ။ အာရှရဲ့ ခံစစ်မှူးတွေကို ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလိမ်အခေါက်တွေ တိကျတဲ့ အဆုံးသတ်မှုတွေနဲ့ ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူးပါ။ မလေးရှား ၊ စင်ကာပူ ၊ ဗီယက်နမ် နိုင်ငံတွေမှာလည်း သွားရောက်ကစားခဲ့ဖူးပြီး သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေမှာလည် အားပေးသူ ပရိသတ်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်သူပါ။
สุขทุกครั้งที่ได้ลงไปวิ่งในสนาม⚽???? #adidasthailand #predator #heretocreate
ပွဲပေါင်း (၁၃၄) ပွဲမှာ သွင်းဂိုး (၇၁) ဂိုးရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ သူရဲ့သွင်းဂိုးမှတ်တမ်းဟာ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲရဲ့ ထာဝရ ဂိုးသွင်းရှင် ကလိုဆေးနဲ့ တူညီနေပြီး၊ မက်ဆီ ၊ အီဗရာဟီမိုဗစ် ၊ ဒေးဗစ်ဗီလာတို့ထက် အသင်းတွက် သွင်းဂိုးပိုမိုသွင်းယူထားနိုင် သူပါ။ ကစားသမားဘ၀မှာတင် နိုင်ငံအသင်းအတွက် ပေးဆပ်ခဲ့သူတစ်ဦး မဟုတ်ပဲ ထိုင်းလက်ရွှေးစင်အသင်းနည်းပြ အဖြစ်လည်း လက်ရှိအချိန်မှာ ဆောင်ရွက်နေသူ ဖြစ်ပါတယ်။ထိပ်ဆုံး (၅) ဦးစာရင်းအပြီးမှာတော့ အာဆီယံဒေသတွင်းမှာ အမှတ်ရစရာ ကစားသမား (၂) ဦးကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။ သူတို့နှစ်ဦးကကော အသင်းတွက် ဘယ်လိုတွေ စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့လည်း ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
မလေးရှားပရိသတ်တွေ စူပါမော့လို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်တဲ့ ဒါဟရီဟာ မလေးရှား နိုင်ငံအတွက်တော့ အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ဦးပါ။ (၇၀) ပြည့်နှစ် ကာလတွေနဲ့ (၈၀) ပြည့်နှစ်ကာလတွေမှာ မလေးရှားအသင်းတွက် ကစားပေးခဲ့ပြီး အသင်းတွက် သွင်းဂိုးတွေများစွာသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် မလေးရှားနိုင်ငံ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေငြာထားခြင်း မရှိတာကြောင့် အခုလိုစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့ခြင်း မရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအသင်းတွက် ပြိုင်ပွဲကြီးတွေအပါအ၀င် အခြားခြေစမ်းပွဲစုစုပေါင်း (၁၂၅) ပွဲကစားခဲ့ပြီး (၉၆) ဂိုးထိသွင်းယူခဲ့တဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟရီဟာ (၁၉၉၁) ခုနှစ် က ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပေမယ့် သူဟာ မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ ဂန္တ၀င်ကစားသမား တစ်ဦးအဖြစ် လက်ရှိအချိန်ထိ ရှင်သန်နေဆဲ ကစားသမားတစ်ဦးပါ။
မော့ဒါဟရီလိုပဲ အသင်းတွက်ခြေစွမ်းပြကစားခဲ့ပြီး ဂိုးတွေသွင်းယူခဲ့ပေမယ့် တရားဝင်ဂိုးအရေအတွက် ရေတွက်ဖော်ပြခြင်း မခံခဲ့ရတဲ့ နောက်ထပ် ကစားသမားတစ်ဦးပါ။ အနီးစပ်ဆုံးသူရဲ့ သွင်းဂိုးတွေစာရင်းကောက်ရာမှာတော့ (၄၂) ဂိုးထိ နိုင်ငံတကာ သွင်းဂိုးသွင်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီး ဆန်းချက် (၃၉ဂိုး) ၊ လူကာကူ(၃၁ဂိုး) တို့ထက်များပြားတဲ့ ပမာဏ တစ်ရပ်ပါ။(၁၉၉၀) ပြည့်နှစ်တွေမှာ အာဆီယံဒေသတွင်း ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ ပွဲစဉ်တိုင်းမှ ခြေစွမ်းပြသ နိုင်ခဲ့ပြီး ကိုင်တီဆက် ၊ ဟွန်ဒက်ခ်ျတို့နဲ့ အပြိင်တောက်ပခဲ့တဲ့ ကစားသမားဖြစ်ပြီး (၁၉၉၇) ခုနှစ်ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ အကောင်းဆုံး ကစားသမား ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအသင်းရဲ့ လူစာရင်းမှာ ချန်ဗာသာနက်ကာ ၊ ပတ်မိုနီအူဒွန် ၊ ကိုစွတ်ဖန်း တို့လို ကစားသမားတွေ ရှိနေပေမယ့် ဆယ်ဆုနှစ်တစ်ခုကြာပြီးချိန်ထိ ကမ္ဘောဒီးယား နိုင်ငံအတွက် ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင် စာရင်းမှာတော့ ဟော့ဆိုချက်ထရာ ရပ်တည်နိုင်နေဆဲပါ။
အာဆီယံဒေသတငြ်ိးိုံင်ငံတေရြဲႚ ဂိံ္ဈဝင်ကစားသမား တေကြိုတော့ ပရိသတ်တေနြဲႛ ရင်ြးီံးမရြိအောင် မုကာခဏဖော်ူပနေကဵပေမယ့် ဘယ်ကစား သမားတေကြိုံင်ငံအသင်းတကြ် သငြ်းဂိုးတြေ ဘယ်လောက်သငြ်းယူထားခဲ့္ဘပီး ဘယ်သူတေကြ အသင်းရဲႚ ထာဝရထိပ်တန်းဂိုးသငြ်းရငြ်ူဖစ်နေလည်းဆိုတာ ကိုတော့ ဖော်ူပခဲ့ဖူးခင်းမရြိပၝဘူး။
အာရအြဆင့်္ဘပိင်ြပြဲမြာ အူမဲဝင်ရောက်ယဉ်္ဘြပိင်ြခငြ့် ရရြိနေတဲိုံ့င်ငံအသင်း ကိုယ်စာူးပကြစားနေတဲ့ ကစားသမားတေနြဲႛ အာရဆြင့်ကို တက်လမြ်းဖိုႛ အားယူနေရတဲိုံ့င်ငံအသင်း ကစားသမားတြေုကားမြာတော့ ပြဲအရေတက်ြနဲႛ သငြ်းဂိုးကြာဟခဵက်က ဋ္ဌကီးမားပၝတယ်။ဒၝေုကာင့် ဒီလိုအသင်းဋ္ဌကီးက အသင်းနဲႛ ပုံမန်ြပြဲထက်ြခငြ့် ရရြိခဲ့တဲ့ ကစားသမားတြေ ရဲႚ သငြ်းဂိုးတေကြ ထိပ်တန်းမြာ ရြိနေခဲ့ တာက သူတိုႛပြဲထက်ြခဲ့တဲ့ ပြဲအရေအတက်ြနဲႛ သငြ်းဂိုး တိုက်ရိုက်အခိဵြးကဵနေတာေုကာင့်ထူးဆန်းတဲ့ ကိင်္စတစ်ရပ်တေ့ မဟုတ်ပၝဘူး။
ဥပမာပေးရရင် အီရန်ကလက်ရြေးစင် တိုက်စစ်မြးဟောင်း အလီဒၝရီဟာ အသင်းတကြ် ကစားခဲ့တဲိုံ့င်ငံတကာပြဲပေၝင်း (၁၄၉) ပြဲမြာ (၁၀၉) ဂိုးသငြ်းယိူိုံင်ခဲ့္ဘပီး ဟန်ဂေရီရဲႚ နာမည်ကေဵာ်ကစားသမား ပတ်ြရြ်ကတ်ထက် သငြ်းဂိုး (၂၅) ဂိုးပိုမို သငြ်းယိူိုံင်ခဲ့ပၝတယ်။ိုံင်ငံတကာသငြ်းဂိုး အမဵားဆုံးကစားသမား ကမ္တာ့ထိပ်တန်း (၁၀) ဦးစာရင်းမြာ အူခားအာရရြဲႚ ထိပ်တန်းကစားသမားတေလြည်း ပၝဝင်နေဆဲူဖစ်ပၝတယ်။ (၈၄) ပြဲ ကစား္ဘပီး သငြ်းဂိုး (၈၀) ရယူထာိးိုံင်တဲ့ ဂဵပန်ိုံင်ငံသား ကာမာမိုတို ၊ (၁၃၇) ပြဲမြာ (၇၈) ဂိုးသငြ်းယူထားတဲ့ အီရန်ိုံင်ငံသား ဟတ်ဆိန် ၊ (၁၁၆) ပြဲကစား္ဘပီး (၇၁) ဂိုးသငြ်းယူထားတဲ့ ဆော်ဒီအာရေးဗီးယား ကစားသမား မာဂဵစ်အဒူလာတိုႛ လိုႛ အာရကြစားသမားတြေ ထိပ်ဆုံး (၁၀) ဦးစာရင်းမြာ ရြိနေပၝတယ်။ တစ်ခဵြိႚ အသင်းရဲႚ ဒုတိယသငြ်းဂိုးအမဵားဆုံး ကစားသမားတေကြလည်း တူခာိးိုံင်ငံကထိပ်တန်း ဂိုးသငြ်းရင်ြတေထြက် သငြ်းဂိုးတြေ ပိုမိုသငြ်းယူထာိးိုံင်တာတေလြည်း ရြိပၝတယ်။
ဒၝဆိုအာဆီယံဒေသတငြ်း အသင်းတေထြဲကကော ထိပ်တန်းဂိုးသငြ်းရင်ြတေကြ ဘယ်အဆင့်မြာ ရပ်တည်နေလည်းဆိုတဲ့ မေးခနြ်းကို Fox Sports Asia ကေူဖုကားပေး လိုက်ပၝတယ်။
၅ – ဘန်ဘန်း ပၝေူမာင်ကတ်စ် ( အင်ဒိုနီးရြား ၈၆ ပြဲ ၃၈ ဂိုး )
ကမ္တာ့အဆင့် ၆၂ ၊ အာရအြဆင့် ၁၈
အင်ဒိုနီးရြာိးိုံင်ငံ အတကြ် သငြ်းဂိုး (၃၈) ဂိုးသငြ်းယူပေးထာိးိုံင်တဲ့ တစ်ဦးတည်း သောကစားသမာူးဖစ်တာေုကာင့် ဘန်ဘန်းရဲႚ နာမည်လည်း ဒီစာရင်းမြာ ပၝဝင်လာခဲ့ပၝတယ်။ အသက် (၃၇)ိံစ်ြရြိန္ဘေပီူဖစ်္ဘပီး အသင်းတကြ် နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ (၂၀၁၂) ခိုံစ်ြထိ သငြ်းဂိုးတေနြဲႛ အသင်းကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သူပၝ။လူငယ်ကစားသမားဘဝကို နယ်သာလန် ကလပ်အသင်းတစ်ခုမြာ စတင်ိုံင်ခဲ့္ဘပီး တဲ့နောက်မြာတောူ့ပည်တော်ူပန်ခဲ့္ဘပီး အင်ဒိုနီးရြားကလပ် ပၝဆီဂဵာ ဂဵကာတာ နဲႛ ဆီလန်ဂေၝ အသင်းတေမြာ ကလပ်အသင်းကစားသမားကို ကုန်ဆုံးခဲ့သူပၝ။အသက်အရယ်ြပိုင်း အရ ကစားသမားတစ်ဦးရဲႚ အကောင်းဆုံး အခဵိန်တေကြို ကုန်ဆုံးခဲ့္ဘပီလိုႛ ဆိုရမြာူဖစ်ပေမယ့် လက်ရြိကစားနေတဲ့ ပၝဆီဂဵာ အသင်းတက်္ဘြပီးခဲ့တဲ့ ရာသီ အင်ဒိုနီးရြား လိဂ် ၁္ဘပိင်ြပြဲမြာ သငြ်းဂိုး (၅) ဂိုးသငြ်းယူပေးခဲ့ ပၝတယ်။(၂၀၁၂) ခိုံစ်ြမြိာိုံင်ငံလက်ရြေးစင်အသင်းကနေ အနားယူခဲ့တာေုကာင့် သငြ်းဂိုး (၃၈) ဂိုးမြာသာ ရပ်တန်ႛသြားခဲ့ရတဲ့ ဘန်ဘန်းရဲႚ သငြ်းဂိုးတေဟြာ ရိုမေးရီးယာိးိုံင်ငံရဲႚ ထိပ်တန်းကစားသမားတြေူဖစ်တဲ့ ဂေဵာ့ခဵ်ဟာဂဵီ နဲႛ မူတူးတိုႛထက် (၃) ဂိုးပိုမိုမဵာူးပားတဲ့ ပမာဏတစ်ရပ်ူဖစ်နေဆဲပၝ။
၄ – ဖီးလ်ယန်းဟတ်စဘန်ႛ ( ဖီလစ်ပိုင် ၉၂ ပြဲ ၄၇ ဂိုး)
ကမ္တာ့အဆင့် ၄၅ ၊ အာရအြဆင့် ၁၃
အခုဖော်ူပနေတဲ့ ထိပ်တန်း ဂိုးသငြ်းရငြ် (၅) ဦးစာရင်းမြာ လက်ရြိအခဵိန်ထိုံင်ငံအသင်းတကြ် ကစားနေဆဲူဖစ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသော ကစားသမာပၝ။ အသက် (၃၀) အရယ်ြရြိန္ဘေပီူဖစ်္ဘပီိးိုံင်ငံအသင်းတကြ် သငြ်းဂိုး (၄၇) ဂိုးသငြ်းယိူိုံင်ခဲ့ ပၝတယ်။ခဵဲလ်ဆီးအသင်းမြာလည်း ကစားခဲ့ဖူး္ဘပီး အသင်းရဲႚ လူသိမဵားတဲ့ ကစားသမားတစ်ဦး တော့အူဖစ်ခဲ့ပေမယ့် ခဵဲလ်ဆီးအသင်းမြာ ကစားခဲ့တဲ့ နာမည်ကေဵာ် ကစားသမား ရက်ြခဵန်ကိုထက် သငြ်းဂိုး (၁) ဂိုးသာလေဵာ့နည်း္ဘပီိးိုံင်ငံတကာ ဂိုးသငြ်းအမဵားဆုံးစာရင်းမြာ အပေၞအောက် ရပ်တည်နေတာူဖစ်ပၝတယ်။ လက်ရြိအခဵိန်မြာလည်ိးိုံင်ငံအသင်းနဲႛအတူ (၂၀၁၉) အာရဖြလားေူခစစ်ပြဲဝင်ရောက် ကစားနေတာေုကာင့် ယန်းဟတ်စဘန်ႛ ရဲႚ သငြ်းဂိုးတြေ ထပ်မူံမင်တြေႛရဖိုႛ ရြိန္ဘေပီး ရပ်တည်မြ ဇယားမြာလည်း နောက်တစ်ဆင့်ကို တက် ရောက်ိုံင်ဖယြ် ရြိနေပၝတယ်။
၃ – လီကောင်ဘင် (ဗီယက်နမ် ၈၃ ပြဲ ၅၁ဂိုး)
ကမ္တာ့အဆင့် ၃၄ ၊ အာရအြဆင့် ၁၁
အားလုံးသော ပရိသတ်တြေ လီကောင်ဗင်က ကစားသမားကောင်းဆိုတာ သိုကပၝတယ်။ ဒၝပေမယ့် လီကောင်ဗင် က ဘယ်လောက်အသင်းတကြ် ထောက်ပံ့ပေိးိုံင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားလည်း ဆိုတဲ့ မေးခနြ်းအတကြ် အေူဖလည်း ရြိနေပၝတယ်။ အသင်းတကြ် သငြ်းဂိုး (၅၁) ဂိုးသငြ်းယူပေးထာိးိုံင်တဲ့ လီကောင်ရဲႚ စမြ်းဆောင်ရည်ဟာူပင်သစ် တိုက်စစ်မြး အန်ြနရီနဲႛ ပိုလန်တိုက်စစ်မြး လီဝန်ဒေၝစကီးတိုႛရဲႚ သငြ်းဂိုးတေနြဲႛ အတူတူပဲူဖစ်ပၝတယ်။ဗီယက်နမ်အသင်းတကြ် ပထမဆုံးနဲႛ တစ်လုံးတည်းသော အာဆီယံ ဆုဖလား ကိုသူႛရဲႚ သငြ်းဂိုးတေနြဲႛ ရယူပေးခဲ့သူပၝ။ အသက် (၃၀) အရယ်ြမြာ အနားယူခဲ့္ဘပီူးဖစ်တဲ့ သူရဲႚ စံခဵိန်ကို ဘယ်ကစားသမားက ခဵြိူးဖတ်ိုံင်မလည်း ကစိတ်ဝင်စားစရာပၝ။
၂ – ဖန်ဒီအာမက် (စင်ကာပူ ၁၀၁ ပြဲ ၅၅ ဂိုး)
ကမ္တာ့အဆင့် – ၂၆ ၊ အာရအြဆင့် – ၉
အာဆီယံဒေသတငြ်ိးိုံင်ငံတေမြာတော့ နာမည်ကေဵာ်ကစားသမားတစ်ဦူးဖစ်္ဘပီး အရြေႚတောင်အာရရြဲႚ အဆုံးသတ်အကောင်ဆုံး တိုက်စစ်မြးတေထြဲက တစ်ဦးပၝ။ဟော်လန်ကလပ် အသင်ူးဖစ်တဲ့ ဂရိုနီဂန်အသင်းမြာ သြားရောက်ကစားခဲ့ဖူး္ဘပီး ယခင် UEFA Cup ယခု ယူရိုပၝလိဂ်္ဘပိင်ြပြဲမြာ အင်တာမီလန်အသင်းဘက်ကို သငြ်းဂိုးတစ်ဂိုး သငြ်းယိူိုံင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကစားသမာူးဖစ်ပၝတယ်။ဖန်ဒီရဲႚ သငြ်းဂိုး (၅၅) ဂိုးဟာ ကင်မရနြ်းတိုက်စစ်မြး အီတူးထက် တစ်ဂိုးသာ လေဵာ့နည်း္ဘပီး အဂဿလန်တိုက်စစ်မြး ရန်ြနီထက် (၃) ဂိုးပိုမိုမဵာူးပားတဲ့ ပမာဏူဖစ်ပၝတယ်။ ဖန်ဒီမြာ သား (၄) ဦးရြ္ဘိပီး (၂) ဦးကတော့ စင်ကာပူအသင်းရဲႚ လက်ရြေးစင်ကစားသမားတြေူဖစ်ပၝတယ်။ တစ်နေႛမြာတော့ သူႛရဲႚ သား (၂) ယောက်ထဲက ဘယ်သူကကော သူႛရဲႚႛစံခဵိန်ကို ခဵြိူးဖတ်ိုံင်မလည်း စောင့်ုကည့်ခဵင်စရာ ကောင်းနေပၝတယ်။
၁ – ကိုင်တီဆတ် ဆီနာေူမာင် (ထိုင်း ၁၃၄ ပြဲ ၇၁ ဂိုး)
ကမ္တာ့အဆင့် – ၉ ၊ အာရအြဆင့် – ၅
အာရရြဲႚ ထိပ်ဆုံး (၅) ဦးစာရင်းဝင်ူဖစ်္ဘပီး ကမ္တာ့ထိပ်ဆုံး (၁၀) ဦးစာရင်းမြာ ရပ်တည်နေတဲ့ ကစားသမားပၝ။ အာရရြဲႚ ခံစစ်မြးတေကြို ကဵမြ်းကဵင်တဲ့ အလိမ်အခေၝက်တြေ တိကဵတဲ့ အဆုံးသတ်မတြေနြဲႛ ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မြးပၝ။ မလေးရြား ၊ စင်ကာပူ ၊ ဗီယက်နမ်ိုံင်ငံတေမြာလည်း သြားရောက်ကစားခဲ့ဖူး္ဘပီး သက်ဆိုင်ရိာိုံင်ငံတေမြာလည် အားပေးသူ ပရိသတ်တြေ ပိုင်ဆိုင်ထာိးိုံင်သူပၝ။ပြဲပေၝင်း (၁၃၄) ပြဲမြာ သငြ်းဂိုး (၇၁) ဂိုးရယူထာိးိုံင်ခဲ့တဲ့ သူရဲႚသငြ်းဂိုးမတ်ြတမ်းဟာ ကမ္တာ့ဖလား္ဘပိင်ြပြဲရဲႚ ထာဝရ ဂိုးသငြ်းရငြ် ကလိုဆေးနဲႛ တူညီန္ဘေပီး၊ မက်ဆီ ၊ အီဗရာဟီမိုဗစ် ၊ ဒေးဗစ်ဗီလာတိုႛထက် အသင်းတကြ် သငြ်းဂိုးပိုမိုသငြ်းယူထာိးိုံင် သူပၝ။ ကစားသမားဘဝမြာတင်ိုံင်ငံအသင်းအတကြ် ပေးဆပ်ခဲ့သူတစ်ဦး မဟုတ်ပဲ ထိုင်းလက်ရြေးစင်အသင်းနည်းူပ အူဖစ်လည်း လက်ရြိအခဵိန်မြာ ဆောင်ရက်ြနေသူဖစ်ပၝတယ်။ထိပ်ဆုံး (၅) ဦးစာရင်းအ္ဘပီးမြာတော့ အာဆီယံဒေသတငြ်းမြာ အမတ်ြရစရာ ကစားသမား (၂) ဦးကဵန်ရြိနေပၝသေးတယ်။ သူတိုႛိံစြ်ဦးကကော အသင်းတကြ် ဘယ်လိုတြေ စမြ်းဆောင်ပေးခဲ့လည်း ဖော်ူပခဵင်ပၝတယ်။
မလေးရြားပရိသတ်တြေ စူပၝမော့လိုႛ တင်စားခေၞဝေၞတဲ့ ဒၝဟရီဟာ မလေးရြာိးိုံင်ငံအတက်ြတော့ အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ဦးပၝ။ (၇၀)ူပည့်ိံစြ် ကာလတေနြဲႛ (၈၀)ူပည့်ိံစ်ြကာလတေမြာ မလေးရြားအသင်းတကြ် ကစားပေးခဲ့္ဘပီး အသင်းတကြ် သငြ်းဂိုးတေမြဵားစြာသငြ်းယူပေိးိုံင်ခဲ့ပေမယ့် မလေးရြာိးိုံင်ငံ တရားဝင်ထုတ်ူပန်ေုကူငာထာူးခင်း မရြိတာေုကာင့် အခုလိုစာရင်းမြာ ပၝဝင်လာခဲူ့ခင်း မရြိတာူဖစ်ပၝတယ်။ိုံင်ငံအသင်းတက်္ဘြပိင်ြပြဲဋ္ဌကီးတေအြပၝအဝင် အူခားေူခစမ်းပြဲစုစုပေၝင်း (၁၂၅) ပြဲကစားခဲ့္ဘပီး (၉၆) ဂိုးထိသငြ်းယူခဲ့တဲ့သူတစ်ဦူးဖစ်ပၝတယ်။ ဒၝဟရီဟာ (၁၉၉၁) ခိုံစြ် က ကယ်ြလန်ြသြားခဲ့္ဘပီူးဖစ်ပေမယ့် သူဟာ မလေးရြာိးိုံင်ငံရဲႚ ဂိံ္ဈဝင်ကစားသမား တစ်ဦးအူဖစ် လက်ရြိအခဵိန်ထိ ရင်ြသန်နေဆဲ ကစားသမားတစ်ဦးပၝ။
မော့ဒၝဟရီလိုပဲ အသင်းတကြ်ေူခစမြ်ူးပကစားခဲ့္ဘပီး ဂိုးတေသြငြ်းယူခဲ့ပေမယ့် တရားဝင်ဂိုးအရေအတကြ် ရေတက်ြဖော်ူပူခင်း မခံခဲ့ရတဲ့ နောက်ထပ် ကစားသမားတစ်ဦးပၝ။ အနီးစပ်ဆုံးသူရဲႚ သငြ်းဂိုးတေစြာရင်းကောက်ရာမြာတော့ (၄၂) ဂိုးထိုံင်ငံတကာ သငြ်းဂိုးသငြ်းယူထာိးိုံင်ခဲ့္ဘပီး ဆန်းခဵက် (၃၉ဂိုး) ၊ လူကာကူ(၃၁ဂိုး) တိုႛထက်မဵာူးပားတဲ့ ပမာဏ တစ်ရပ်ပၝ။(၁၉၉၀)ူပည့်ိံစ်ြတေမြာ အာဆီယံဒေသတငြ်း္ဘပိင်ြပြဲတေရြဲႚ ပြဲစဉ်တိုင်းမြေူခစမြ်ူးပသိုံင်ခဲ့္ဘပီး ကိုင်တီဆက် ၊ ဟန်ြဒက်ခဵ်တိုႛနဲႛ အ္ဘပိင်တောက်ပခဲ့တဲ့ ကစားသမာူးဖစ်္ဘပီး (၁၉၉၇) ခိုံစ်ြရဲႚ အရြေႚတောင်အာရြ အကောင်းဆုံး ကစားသမာူးဖစ်ပၝတယ်။လက်ရြိအသင်းရဲႚ လူစာရင်းမြာ ခဵန်ဗာသာနက်ကာ ၊ ပတ်မိုနီအူဒနြ် ၊ ကိုစတ်ြဖန်း တိုႛလို ကစားသမားတြေ ရြိနေပေမယ့် ဆယ်ဆိုံစ်ြတစ်ခုက္ဘာပီးခဵိန်ထိ ကမ္တောဒီးယာိးိုံင်ငံအတကြ် ထိပ်တန်းဂိုးသငြ်းရငြ် စာရင်းမြာတော့ ဟော့ဆိုခဵက်ထရာ ရပ်တည်ိုံင်နေဆဲပၝ။
Home Football ဒေသတွင်းကို သွင်းဂိုးတွေနဲ့ စိုးမိုးထားခဲ့သူများ